လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုခိုးယူသော Play စတိုးမှဂူဂဲလ်မှအပလီကေးရှင်း ၈၅ ခုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည် Androidsis
Play Store မှစကားဝှက်များကိုခိုးယူသောအက်ပလီကေးရှင်း ၈၅ ခုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
Google သည် Android သုံးစွဲသူများ၏လုံခြုံရေးကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကကြိုးစားနေသည်။ သူတို့ကပုံမှန်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြပြီ Play စတိုးမှအန္တရာယ်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများသန်းချီသော operating system အသုံးပြုသူများကိုအန္တရာယ်ကျရောက်စေသည်။ တူကိရိယာများ၏ဆိုက်ရောက် Google ကကာကွယ်ပါ Play မျှော်လင့်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ရလဒ်ကသူတို့ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်းအပြုသဘောမရှိကြပေ။
အန္တရာယ်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်လူကြိုက်များသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်ပေါ်လာသည်။ တကယ်တော့, သုံးစွဲသူစကားဝှက်ကိုခိုးယူသောကြောင့် Google သည် Play Store မှအပလီကေးရှင်း ၈၅ ခုကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်. ဘယ်လိုဒီ applications များစတိုးဆိုင်သို့ရခဲ့တာလဲ
စိတ်အချရဆုံးအရာက ဤအပလီကေးရှင်းအများအပြားအလွန်ရေပန်းစားခဲ့ကြသည်။ Mr President Trump, United States ၏ဥက္က္ဌနှင့်ပတ်သက်သောဂိမ်းမိတ္တူသည်ဤအန္တရာယ်ရှိသောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သူ၏ downloads သည်တစ်သန်းကျော်သွားသည်။ အခြား 84 applications များအများအပြားနေစဉ် Google Play မှာဒေါင်းလုပ် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်.
Play Store မှအက်ပလီကေးရှင်း ၈၅ ခုကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ကြောင်း Google အတည်ပြုခဲ့ပြီး။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်လွယ်ကူစွာအနားယူနိုင်သည်။ ယခုပြproblemနာအသစ်သည်လက်ရှိ Android တွင်ရှိသည့်လုံခြုံရေးပြproblemsနာများစွာကိုဖော်ပြသည်။ သောကြောင့် ဂူဂဲလ်ကတကယ်ကိုကြိုးစားအလုပ်လုပ်ရတယ် သူတို့ကိုအဖြေတစ်ခုပေးရန်။
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်, Android အသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။ အကယ်၍ သင်တို့ထဲမှတစ်ယောက်သည် Mr President Trump ကိုအမည်တပ်ထားသောတစ်ခုတည်းသော application ကို download လုပ်ခဲ့လျှင်၎င်းကိုသင်၏ဖုန်းမှဖျက်ပစ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ ဒီလုံခြုံရေးအားနည်းချက်အသစ်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Play Store မှစကားဝှက်များကိုခိုးယူသောအက်ပလီကေးရှင်း ၈၅ ခုကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်
လျှောက်လွှာများ၏အမည်များကိုသာမစ္စတာသမ္မတ Trump, ထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိရရှိနိုင်ပါသည်သမျှသောသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒံယေလ borrelli ဟုသူကပြောသည်
အက်ပလီကေးရှင်းတွေဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာရှက်စရာပဲ၊ ငါသူတို့ဘာကိုထိန်းချုပ်သလဲ။ မည်သူမဆို app တစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်၊ မည်သူမျှဘောလုံးမပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်နှစ်ခုနှင့်ပြaနာတစ်ခုရှိပြီးကစားစတိုးဆိုင်သည်လုံခြုံသည်ဟုပြောကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!!!!!
Daniel Borrelli အားပြန်ကြားပါ
Meiigoo S8 လက်ဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ giveaway !!